အိမ်ယာဥယျာဉ် စိုက်ပျိုးရေးနဲ့ ဈေးကွက်အရောက် စီမံခန့်ခွဲမှု နည်းပညာ
တရုတ်ဘက်ပို့မရ၍ မူဆယ်မြို့နားတွင် စွန့်ပစ်လိုက်ရသည့် ပြောင်းဖူးများ။ (မေ ၁၅၊ ၂၀၂၀)
မြန်မာ့စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍ တိုးတက်လာအောင် ရေအစီအမံ ကောင်းကောင်းနဲ့ စက်မှုလယ်ယာ ဖြစ်လာဖို့ အပြင် စိုက်ပျိုးတာကနေ ဈေးကွက်ရောက်တဲ့အထိ အဆင့်ဆင့်စံနစ်တကျ စီမံခန့်ခွဲတဲ့ နည်းပညာနဲ့ ဈေးကွက်အစီအမံပါ လိုအပ်နေတယ်လို့ စိုက်ပျိုးရေးပညာရှင် ဒေါက်တာထွန်းဝင်းက ပြောပါတယ်။
ဒီလို နည်းစံနစ်ကျကျ စီမံခန့်ခွဲ နိုင်မယ် ဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကိုဗစ် ၁၉ ကယ်ဆယ်ကူညီရေး ရံပုံငွေနဲ့ home garden လို့ခေါ်တဲ့ အိမ်ယာဥယာဉ် စိုက်ပျိုးရေးကို အားပေးဖို့ လုပ်နေတာအတွက် အကျိုး ဖြစ်ထွန်းနိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒီအိမ်ယာဥယာဉ် စိုက်ပျိုးရေးကို ဘယ်အတိုင်းတာအထိ လုပ်နိုင်မှာပါလဲ။
ဒေါက်တာထွန်းဝင်း။. ။“ကျနော်တို့ ခေါင်းဆောင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းက အိမ်နောက်ဖေးဈေးဆိုင်တည် - သူကစပြီး ဒီအဆိုကို လုပ်ခိုင်းတာ။ အခုက ဘာဖြစ်လို့ ဒီလိုမျိုး မလုပ်ကြသလဲ ဆိုရင် ရေအကန့်အသတ် ရှိတယ်။ စိုက်ပျိုးရေက အချိန်မရွေး မရနိုင်ဘူး။ စိုက်ပျိုးရေရနိုင်အောင် စီမံပေးဖို့ လိုတယ်။နောက်ပြီး သူတို့လုပ်တဲ့လူတွေအတွက် ဈေးကွက်ပေါ့နော်။ ထွက်လာတဲ့ ကုန်ပစ္စည်းကို၊သူသူငါငါ ငရုတ် လုပ်မယ်၊ ရုံးပတီလုပ်မယ်၊ ချဉ်ပေါင်လုပ်မယ်၊ ဖရုံ၊ သခွါး၊ အားလုံးတပြိုင်နက် ထွက်လာ၊ တောင်ပုံရာပုံ။ ဒါတွေက ကျနော် အင်းလေးမှာ ကြုံရတယ်။ အင်းလေးမှာ ခရမ်းချဉ်သီးတွေ တရုတ်ပြည် ပို့လို့ မရတဲ့ အခါကျတော့ တပုံတခေါင်းနဲ့ ဒီအတိုင်းပဲ ပုပ်သိုး ပျက်စီးသွားတယ်လေ။
အဲဒီတော့ လုပ်ပြီးတော့ အရာမရောက်တဲ့ဟာတွေ ဒီလိုမျိုး ဖြစ်သွားမယ့် ဟာအတွက် value chain ဖြစ်တဲ့ စပြီးစိုက်တာကနေပြီးတော့ ဈေးကွက် အစီအမံ လိုတာပေါ့။ အခု ဈေးကွက် တွေကလည်း ပြင်ပမှာပိတ်နေတော့၊ border ပိတ်နေတော့ ထွက်လာတဲ့ ဟာကို မြန်မာပြည်ကလူတွေ ဝအောင် စားရမှာနော်။ ဒါပေမယ့် ရေရှည်မှာတော့ ထွက်လာတာကို နိုင်ငံတကာလိုအပ်ချက် standard စံနဲ့ residual ခေါ်တဲ့ အဆိပ်အတောက် ကင်းတဲ့ အသီးနှံတွေ ထုတ်နိုင်မယ် ဆိုရင်တော့၊ ဈေးကွက် ရှာနိုင်မယ် ဆိုရင်တော့၊ တော်တော် အလားအလာကောင်းတဲ့ စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ရေး လုပ်ငန်း တခုပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ဒါကို ဘယ်သူက လုပ်မှာလဲ ဆိုရင်တော့ ဈေးကွက် အနေအထား ကြည့်လိုက်ရင်တော့ အားရစရာ မရှိပါဘူး။”
မေး။.။“ဘာကြောင့် အားမရစရာ ဖြစ်နေတာပါလဲ။”
ဒေါက်တာထွန်းဝင်း။. ။“အသီးအနှံအားလုံးက bilateral ခေါ်တဲ့ ၂ ဦး ၂ ဖက် စာချုပ်ချုပ် ထားတဲ့ ဈေးကွက်မှ မဟုတ်ရပါပဲနဲ့။ သူတို့ ကျရာဈေးကို သူတို့ ပေးတဲ့ ဈေးမှာ ယူနေရတဲ့ ဈေးကွက် နဲ့ သွားပြီး အလုပ်လုပ်နေရတဲ့ အတွက် ဒီဈေးကွက် မသေချာ မရေရာမှု အောက်မှာ ဒီစိုက်ပျိုးရေးက မတိုးတက်တာလည်း ရှိတယ်။ အဲဒီတော့ စောစောက ရေနဲ့ စက်ကရိယာ လိုသလို ဈေးကွက်ကလည်း အဓိကပဲ။
ဒီ ထွက်လာမယ့် ပစ္စည်းတွေ အတွက် ဈေးကွက်ကိုလည်း နိုင်ငံတော်ကနေ သူတို့ပေးသမျှယူ ရောင်းရမယ့် စံနစ်ထက် အပြန်အလှန် အချိန်မရွေးကို ကျနော်တို့က အချိန်နဲ့ကိုက် စိုက်ပျိုး ထုတ်လုပ်နိုင်မယ့်၊ သူတို့လိုချင်တဲ့ ပစ္စည်းကို ကျနော်တို့က အချိန်နဲ့ကိုက် စီမံ စိုက်ပျိုး ထုတ်လုပ်နိုင်မယ့် စံနစ်မရောက်မချင်း ဒီကနေ့ အထိပဲ တရုတ်နယ်စပ်မှာ တရုတ်စီးပွါးရေးသမားတွေ ပေးသမျှ ယူပြီးတော့ လုပ်နေရတဲ့ အနေထားကနေ လွတ်မယ်။”
မေး။.။“ဒီ အိမ်နောက်ဖေး ဈေးဆိုင်တည် တာကို ဥပမာလေးပြောပြပေးပါဆရာ။ ဘယ်နိုင်ငံမှာ လုပ်နေသလဲ ဆိုတာ”
ဒေါက်တာထွန်းဝင်း။.။“အိန္ဒိယ အစိုးရက ဒါကို သူတို့ လယ်သမားတွေကို ပေးလုပ်တာ တော်တော် ကြာပြီ။ တခြား နိုင်ငံတွေ ထဲမှာတော့ NGO တွေ ဖြစ်တဲ့ အမေရိကန်နိုင်ငံ စီရဲလ်တာ က Lentessasဆိုတဲ့ NGO ကုမ္ပဏီကြီကလည်း အဲဒီ သမဝါယမ အိမ်ခြံhome garden တွေကို တိုးချဲ့စိုက်ဖို့ အခုထိ လုပ်တုန်းပဲ။ သူတို့က နိုင်ငံတကာမှာ လုပ်တယ်။ ပံ့ပိုးမှု ပေးတယ်။ သီးနှံတွေကို အိမ်ခြံတွေ မှာ စိုက်ပျိုးစေတယ်။ အိန္ဒိယနိုင်ငံကြီးရဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေဟာ အလွန်ကို ဦးနှောက် ပြေးတယ်။ သူတို့က အားလုံး ရေရအောင် လုပ်ပေးတယ်။ သိပ်ကြီးမားတဲ့ နိုင်ငံမှာတောင် ရေတွေ အားလုံးရောက်တယ်။ ရောက်တော့ လူတွေက အိမ်ဝင်း ထဲမှာ သီးနှံတွေ စိုက်ကြတယ်။ နောက် စားသုံးတဲ့ demand ကလည်း သူတို့သည် အားလုံးက ဟင်းသီးဟင်းရွက် စားသုံးတဲ့ ပြည်သူပြည်သားများ ဖြစ်တဲ့အတွက် သူတို့ ပြည်ထဲမှာ အဆင်ပြေတယ်။
ကျွန်တော်တို့ပြည်ကတော့ ပိုလျှံတဲ့ ဟာတွေကို၊ ပိုတဲ့ဟာကို ဘယ်လို အကျိုးရှိအောင် ထွက်ကုန် အနေနဲ့ ဘယ်လိုလုပ်မလဲ ဆိုတာပဲ အရေးကြီးပါတယ်။”
မေး။.။ “ဟုတ်ကဲ့ပါ။ home garden စီမံကိန်းတွေနဲ့ စိုက်ပြီး ထွက်လာတဲ့ ပိုလျှံတဲ့ ပစ္စည်းတွေကို ဘယ်လို လုပ်ရင် ကောင်းမလဲ ဆရာ”
ဒေါက်တာထွန်းဝင်း။။“လောလောဆယ်မှာတော့ ရှမ်းပြည်မှာ ဂေါ်ဖီခင်းတွေ။ ဒီဂေါ်ဖီခင်းတွေ အားလုံးဟာ ယနေ့ ရင့်မှည့်လို့ ရိတ်သိမ်းတဲ့ အခါ ကျတော့ ဈေးကွက်မရှိဘူး။တရုတ်ဈေးကွက် ပိတ်လိုက်တဲ့ အတွက်။ ကိုဗစ် ဒါနအလှူတွေနဲ့ ပြည်တွင်က ရှားပါးတဲ့ ဒေသတွေမှာ လှူနေရတဲ့ အနေထားပေါ့နော်။ အခု နောက်ပိုင်းမှာ သူ့လိုပဲ တန်ဖိုးရှိတဲ့ သီးနှံ၊ ဥပမာ သရက်သီး။ ကျနော်တို့ ဆီက သရက်သီးသည် တလုံးကို အနည်းဆုံး ၅၀၀ လောက်ရှိတာ။ နဲတာမဟုတ်ဖူး သီးတာမှ။ ဒီ ရပ်စောက်တို့ ဆီဆိုင်တို့၊ တောင်ကြီး ပတ်လည်၊ ဟိုပုန်းပတ်လည်၊ မြင်မဆုံး သရက်ခြံကြီးတွေ၊ မန္တလေး ပတ်ဝန်းကျင်၊ မတ္တရာ ကျောက်ဆည်၊ စဉ့်ကိုင်၊ မြစ်သား၊ အဲဒီမှာ သရက်ခြံတွေ၊ လေယာဉ်ပေါ်က ကြည့်ရင် အပြည့်ပဲ။ မြင်လို့မဆုံး။ အခု ရင့်မှည့် ရိတ်သိမ်းပြီ။ ဒါပေမယ့် ဒီသရက်သီးတွေသည် တရုတ်ပြည်က ဈေးကွက် ပိတ်ထားတဲ့ အတွက် ယနေ့ သူတို့မှာ ဒီသရက်သီးတွေကို ပြည်တွင်းပဲ လှည့်ရောင်းရတယ်။ ကျန်တဲ့ ဟာကတော့ လေလွင့် ဆုံးရှုံးပေါ့နော်။
အဲဒီလို အများကြီးပေါ့၊ ဖရဲ၊ သခွါး၊ ဒီအတိုင်းပါပဲ။ အာလူးတွေ ရှမ်းပြည်မှာ ရိတ်တော့မယ်။ အများကြီး ထွက်တော့မယ်။ ခရမ်းချဉ်တွေ အင်းလေးကန်ထဲက ထွက်တော့မယ်။ အထားမခံတဲ့ သီးနှံတွေ ဖြစ်တဲ့အတွက် ဒီအသီးအနှံတွေ ဒီလို ရိတ်သိမ်းပြီးတော့ ဈေးကွက်မှာ အခြေမလှ လို့ရှိရင် နိုင်ငံတော် အစိုးရ အနေနဲ့ ဘာလုပ်မလဲဆိုတာ ကျနော်တို့ အစိုးရတာဝန် ဖြစ်သွားပြီ။ အဆုံး အထိ ကျနော်တို့ တိုင်းပြည်ရဲ့ ထုတ်ကုန်တွေ၊ အကျိုးရှိအောင် မစီမံ သေးဘူး။
ဂျပန်က ဘယ်လို စီမံ သလဲ။ ဒီ prefecture ခေါ်တဲ့ တိုင်းနဲ့ပြည်နယ် ဒေသတခုမှာလွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ရာကျော် ကတည်းက အစုအဖွဲ့ လယ်သမား task force တွေ ဖွဲ့ပြီးတော့ အအေးခန်း ကုန်လှောင်စခန်း - cold storage facility တခု ဒေသတိုင်းမှာ prefecture တိုင်းမှာ ဆောက်ပေးတယ်။ ဒေသ ၅၀ ဆို အခု ၅၀။
အဲဒါ တလုံးကတော့ ဈေးတော့ ကြီးတာပေါ့။ ဒါ ကျနော်တို့ အနေနဲ့ မတတ်နိုင်ဘူး။ ယွမ် သန်းလေးထောင် တန်တယ်။ ဒေသတိုင်းမှာ တလုံးစီဆောက်ပေးတဲ့ အတွက် လယ်သမားသည် အချိန် မရွေး သူက ထွက်လာတဲ့ သီးနှံ၊ အခု ကျနော်တို့ ပြောနေတဲ့ ရှမ်းပြည်က ထွက်တဲ့ မုန်လာ၊ ဂေါ်ဖီ၊ ဂျင်း၊ ကြက်သွန်၊ အာလူး၊ အခု လို ထွက်သမျှကို အားလုံး ဌာနကို သွားပေး။ ဌာနက အားလုံး သိမ်းဆည်း၊ ဆေးကျော၊ သန့်စင်၊ အဆင့်ခွဲ grading ခွဲ၊ ထုပ်ပိုး ပြီးတော့ ဈေးကွက် market အရောက် ပို့ပေးတယ်။”
မေး။.။“စိုက်ပျိုးထွက်ကုန်တွေကို သိမ်းဆည်းပေးမယ့် cold storage အအေးခန်း ကုန်လှောင် စခန်းကြီးတွေ ကို ဂျပန်မှာ ဆောက်လုပ်နိုင်ပေမယ့် မဆောက်လုပ်နိုင်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရော ဘယ်လို လုပ်န”ိုင်ပါသလဲ။
ဒေါက်တာထွန်းဝင်း။. ။“သူ့လောက် အကုန်မခံနိုင်ပေမယ့် အကုန်အကျ နည်းတဲ့ cold facility အအေးခန်း ကုန်လှောင်ရုံ ပေါ့ဗျာ။ in let – out let လောက်ရှိတဲ့ aircon လေအေးစက်တွေ၊ တခုက အဲကွန်း တွေကို သီးနှံခင်းတဲ့ ကြမ်းခင်းကနေ in let တခု သွင်းပေးမယ်။ ဂိုဒေါင်ရဲ့ အလယ်ခေါင် ကနေ out let နဲ့ ထွက်မယ်။ ဒီလို cold storage မျိုးတွေ အများကြီးလုပ်နိုင်တယ်။
နောက် ဒီလို အအေးမခံ နိုင်ဘူး။ ပမာဏက သိပ်များမယ် ဆိုရင် အခြောက်ခံမယ်။ ရှမ်ပြည်က နေရောင်က ၂၄ နာရီ။ အခြောက်ခံ ပြီးတော့ အခြောက်ခံ ပစ္စည်းတွေကို ကျနော်တို့က ဘယ်လို ထိန်းသိမ်းပြီး ဘယ်လို ဈေကွက်မှာ သွားမလဲ ဆိုတာ ကျနော်တို့ စဉ်းစားမယ်။ ဒါက ဒုတိယ နည်းပေါ့နော်။
တတိယနည်းကတော့ လုံးဝ juice အရည်ဖြစ်နိုင်တဲ့ သရက်သီးလိုဟာမျိုးတွေ ခရမ်းချဉ်သီးလို ဟာမျိုးတွေ ကျတော့ juice ဖျော်ရည် ထုတ်လို့ ရတယ်။ အရှေ့တောင်အာရှမှာ ကျနော်တို့ ကောင်းကောင်းကို supply လုပ်လို့ တင်သွင်းလို့ရတယ်။ သရက်သီးကို။ အခု အနေထားမှာ ဆိုရင် သူဌေးဖြစ်လောက်တယ်။ သရက်ကို အနှစ်လုပ်ပြီးတော့ အအေးခံပြီးတော့ အထားခံအောင် preserved လုပ်ပြီးတော့ ပိုးသတ်ဆေး ဘာညာ၊ preservation လုပ်ပြီးတော့များ လုပ်နိုင်မယ် ဆိုရင်တော့ ဒါက ရှေ့မှာ အလားအလာ ရှိတဲ့ဟာ။
ခရမ်းချဉ်လည်း ဒီအတိုင်းပဲ။ ခရမ်းချဉ်ကို ပြုတ်ပြီးတော့ Ketchup ပေါ့ ခရမ်းချဉ် ဆော့စ် sauce လုပ်ပြီးတော့ နိုင်ငံတကာ ပို့နိုင်တယ်။
နောက် ပဲတွေ ဆို မြန်မာပြည်မှာက ပဲက ၁၁ သန်းလောက် စိုက်တယ်။ ဆီထွက်သီးနှံက ၁၄ သန်းလောက် စိုက်တယ်။ အားလုံးပေါင်း ၂၅ သန်းလောက် စိုက်တယ်။၂၅ သန်းလောက်ရှိတဲ့ ပဲသီးနှံတွေ၊ ဒီဟာတွေကို စည်သွပ်ဘူး လေးတွေ can ဘူးလေးတွေ၊ နို့ဆီဘူး နဲ့ ပဲတွေကို ပြုတ်ပြီးတော့ သေချာ သိမ်းဆည်းပြီး ပဲတွေကို ရောင်းတာလေ။ ဒီမှာက ပဲ ရှုံးပြီ ဆိုရင်လည်း ဆက်တိုက်ကို ရှုံးတဲ့ အတိုင်းပဲ ခံရတာ ပေါ့နော်။ ဘယ်သူမှ ကယ်မယ့် အနေထား မရှိပဲ ဖြစ်နေတယ်။”
စိုက်ပျိုးရေးပညာရှင် ဒေါက်တာထွန်းဝင်းရဲ့ ပြောကြားချက်နဲ့ပဲ ဒီသီတင်းပတ်အတွက် သိပ္ပံနဲ့နည်းပညာ ကဏ္ဍကို ဒီမှာပဲ ရပ်နား လိုက်ပါရစေ။
မွနျမာ့စိုကျပြိုးရေးကဏ်ဍ တိုးတကျလာအောငျ ရအေစီအမံ ကောငျးကောငျးနဲ့ စကျမှုလယျယာ ဖွဈလာဖို့ အပွငျ စိုကျပြိုးတာကနေ ဈေးကှကျရောကျတဲ့အထိ အဆငျ့ဆငျ့စံနဈတကြ စီမံခနျ့ခှဲတဲ့ နညျးပညာနဲ့ ဈေးကှကျအစီအမံပါ လိုအပျနတေယျလို့ စိုကျပြိုးရေးပညာရှငျ ဒေါကျတာထှနျးဝငျးက ပွောပါတယျ။
ဒီလို နညျးစံနဈကကြ စီမံခနျ့ခှဲ နိုငျမယျ ဆိုရငျ မွနျမာနိုငျငံမှာ ကိုဗဈ ၁၉ ကယျဆယျကူညီရေး ရံပုံငှနေဲ့ home garden လို့ချေါတဲ့ အိမျယာဥယာဉျ စိုကျပြိုးရေးကို အားပေးဖို့ လုပျနတောအတှကျ အကြိုး ဖွဈထှနျးနိုငျတယျလို့ ဆိုပါတယျ။
ဒီအိမျယာဥယာဉျ စိုကျပြိုးရေးကို ဘယျအတိုငျးတာအထိ လုပျနိုငျမှာပါလဲ။
ဒေါကျတာထှနျးဝငျး။. ။“ကနြျောတို့ ခေါငျးဆောငျကွီး ဗိုလျခြုပျအောငျဆနျးက အိမျနောကျဖေးဈေးဆိုငျတညျ - သူကစပွီး ဒီအဆိုကို လုပျခိုငျးတာ။ အခုက ဘာဖွဈလို့ ဒီလိုမြိုး မလုပျကွသလဲ ဆိုရငျ ရအေကနျ့အသတျ ရှိတယျ။ စိုကျပြိုးရကေ အခြိနျမရှေး မရနိုငျဘူး။ စိုကျပြိုးရရေနိုငျအောငျ စီမံပေးဖို့ လိုတယျ။နောကျပွီး သူတို့လုပျတဲ့လူတှအေတှကျ ဈေးကှကျပေါ့နျော။ ထှကျလာတဲ့ ကုနျပစ်စညျးကို၊သူသူငါငါ ငရုတျ လုပျမယျ၊ ရုံးပတီလုပျမယျ၊ ခဉျြပေါငျလုပျမယျ၊ ဖရုံ၊ သခှါး၊ အားလုံးတပွိုငျနကျ ထှကျလာ၊ တောငျပုံရာပုံ။ ဒါတှကေ ကနြျော အငျးလေးမှာ ကွုံရတယျ။ အငျးလေးမှာ ခရမျးခဉျြသီးတှေ တရုတျပွညျ ပို့လို့ မရတဲ့ အခါကတြော့ တပုံတခေါငျးနဲ့ ဒီအတိုငျးပဲ ပုပျသိုး ပကျြစီးသှားတယျလေ။
အဲဒီတော့ လုပျပွီးတော့ အရာမရောကျတဲ့ဟာတှေ ဒီလိုမြိုး ဖွဈသှားမယျ့ ဟာအတှကျ value chain ဖွဈတဲ့ စပွီးစိုကျတာကနပွေီးတော့ ဈေးကှကျ အစီအမံ လိုတာပေါ့။ အခု ဈေးကှကျ တှကေလညျး ပွငျပမှာပိတျနတေော့၊ border ပိတျနတေော့ ထှကျလာတဲ့ ဟာကို မွနျမာပွညျကလူတှေ ဝအောငျ စားရမှာနျော။ ဒါပမေယျ့ ရရှေညျမှာတော့ ထှကျလာတာကို နိုငျငံတကာလိုအပျခကျြ standard စံနဲ့ residual ချေါတဲ့ အဆိပျအတောကျ ကငျးတဲ့ အသီးနှံတှေ ထုတျနိုငျမယျ ဆိုရငျတော့၊ ဈေးကှကျ ရှာနိုငျမယျ ဆိုရငျတော့၊ တျောတျော အလားအလာကောငျးတဲ့ စိုကျပြိုးထုတျလုပျရေး လုပျငနျး တခုပါပဲ။ ဒါပမေယျ့ ဒါကို ဘယျသူက လုပျမှာလဲ ဆိုရငျတော့ ဈေးကှကျ အနအေထား ကွညျ့လိုကျရငျတော့ အားရစရာ မရှိပါဘူး။”
မေး။.။“ဘာကွောငျ့ အားမရစရာ ဖွဈနတောပါလဲ။”
ဒေါကျတာထှနျးဝငျး။. ။“အသီးအနှံအားလုံးက bilateral ချေါတဲ့ ၂ ဦး ၂ ဖကျ စာခြုပျခြုပျ ထားတဲ့ ဈေးကှကျမှ မဟုတျရပါပဲနဲ့။ သူတို့ ကရြာဈေးကို သူတို့ ပေးတဲ့ ဈေးမှာ ယူနရေတဲ့ ဈေးကှကျ နဲ့ သှားပွီး အလုပျလုပျနရေတဲ့ အတှကျ ဒီဈေးကှကျ မသခြော မရရောမှု အောကျမှာ ဒီစိုကျပြိုးရေးက မတိုးတကျတာလညျး ရှိတယျ။ အဲဒီတော့ စောစောက ရနေဲ့ စကျကရိယာ လိုသလို ဈေးကှကျကလညျး အဓိကပဲ။
ဒီ ထှကျလာမယျ့ ပစ်စညျးတှေ အတှကျ ဈေးကှကျကိုလညျး နိုငျငံတျောကနေ သူတို့ပေးသမြှယူ ရောငျးရမယျ့ စံနဈထကျ အပွနျအလှနျ အခြိနျမရှေးကို ကနြျောတို့က အခြိနျနဲ့ကိုကျ စိုကျပြိုး ထုတျလုပျနိုငျမယျ့၊ သူတို့လိုခငျြတဲ့ ပစ်စညျးကို ကနြျောတို့က အခြိနျနဲ့ကိုကျ စီမံ စိုကျပြိုး ထုတျလုပျနိုငျမယျ့ စံနဈမရောကျမခငျြး ဒီကနေ့ အထိပဲ တရုတျနယျစပျမှာ တရုတျစီးပှါးရေးသမားတှေ ပေးသမြှ ယူပွီးတော့ လုပျနရေတဲ့ အနထေားကနေ လှတျမယျ။”
မေး။.။“ဒီ အိမျနောကျဖေး ဈေးဆိုငျတညျ တာကို ဥပမာလေးပွောပွပေးပါဆရာ။ ဘယျနိုငျငံမှာ လုပျနသေလဲ ဆိုတာ”
ဒေါကျတာထှနျးဝငျး။.။“အိန်ဒိယ အစိုးရက ဒါကို သူတို့ လယျသမားတှကေို ပေးလုပျတာ တျောတျော ကွာပွီ။ တခွား နိုငျငံတှေ ထဲမှာတော့ NGO တှေ ဖွဈတဲ့ အမရေိကနျနိုငျငံ စီရဲလျတာ က Lentessasဆိုတဲ့ NGO ကုမ်ပဏီကွီကလညျး အဲဒီ သမဝါယမ အိမျခွံhome garden တှကေို တိုးခြဲ့စိုကျဖို့ အခုထိ လုပျတုနျးပဲ။ သူတို့က နိုငျငံတကာမှာ လုပျတယျ။ ပံ့ပိုးမှု ပေးတယျ။ သီးနှံတှကေို အိမျခွံတှေ မှာ စိုကျပြိုးစတေယျ။ အိန်ဒိယနိုငျငံကွီးရဲ့ ခေါငျးဆောငျတှဟော အလှနျကို ဦးနှောကျ ပွေးတယျ။ သူတို့က အားလုံး ရရေအောငျ လုပျပေးတယျ။ သိပျကွီးမားတဲ့ နိုငျငံမှာတောငျ ရတှေေ အားလုံးရောကျတယျ။ ရောကျတော့ လူတှကေ အိမျဝငျး ထဲမှာ သီးနှံတှေ စိုကျကွတယျ။ နောကျ စားသုံးတဲ့ demand ကလညျး သူတို့သညျ အားလုံးက ဟငျးသီးဟငျးရှကျ စားသုံးတဲ့ ပွညျသူပွညျသားမြား ဖွဈတဲ့အတှကျ သူတို့ ပွညျထဲမှာ အဆငျပွတေယျ။
ကြှနျတျောတို့ပွညျကတော့ ပိုလြှံတဲ့ ဟာတှကေို၊ ပိုတဲ့ဟာကို ဘယျလို အကြိုးရှိအောငျ ထှကျကုနျ အနနေဲ့ ဘယျလိုလုပျမလဲ ဆိုတာပဲ အရေးကွီးပါတယျ။”
မေး။.။ “ဟုတျကဲ့ပါ။ home garden စီမံကိနျးတှနေဲ့ စိုကျပွီး ထှကျလာတဲ့ ပိုလြှံတဲ့ ပစ်စညျးတှကေို ဘယျလို လုပျရငျ ကောငျးမလဲ ဆရာ”
ဒေါကျတာထှနျးဝငျး။။“လောလောဆယျမှာတော့ ရှမျးပွညျမှာ ဂျေါဖီခငျးတှေ။ ဒီဂျေါဖီခငျးတှေ အားလုံးဟာ ယနေ့ ရငျ့မှညျ့လို့ ရိတျသိမျးတဲ့ အခါ ကတြော့ ဈေးကှကျမရှိဘူး။တရုတျဈေးကှကျ ပိတျလိုကျတဲ့ အတှကျ။ ကိုဗဈ ဒါနအလှူတှနေဲ့ ပွညျတှငျက ရှားပါးတဲ့ ဒသေတှမှော လှူနရေတဲ့ အနထေားပေါ့နျော။ အခု နောကျပိုငျးမှာ သူ့လိုပဲ တနျဖိုးရှိတဲ့ သီးနှံ၊ ဥပမာ သရကျသီး။ ကနြျောတို့ ဆီက သရကျသီးသညျ တလုံးကို အနညျးဆုံး ၅၀၀ လောကျရှိတာ။ နဲတာမဟုတျဖူး သီးတာမှ။ ဒီ ရပျစောကျတို့ ဆီဆိုငျတို့၊ တောငျကွီး ပတျလညျ၊ ဟိုပုနျးပတျလညျ၊ မွငျမဆုံး သရကျခွံကွီးတှေ၊ မန်တလေး ပတျဝနျးကငျြ၊ မတ်တရာ ကြောကျဆညျ၊ စဉျ့ကိုငျ၊ မွဈသား၊ အဲဒီမှာ သရကျခွံတှေ၊ လယောဉျပျေါက ကွညျ့ရငျ အပွညျ့ပဲ။ မွငျလို့မဆုံး။ အခု ရငျ့မှညျ့ ရိတျသိမျးပွီ။ ဒါပမေယျ့ ဒီသရကျသီးတှသေညျ တရုတျပွညျက ဈေးကှကျ ပိတျထားတဲ့ အတှကျ ယနေ့ သူတို့မှာ ဒီသရကျသီးတှကေို ပွညျတှငျးပဲ လှညျ့ရောငျးရတယျ။ ကနျြတဲ့ ဟာကတော့ လလှေငျ့ ဆုံးရှုံးပေါ့နျော။
အဲဒီလို အမြားကွီးပေါ့၊ ဖရဲ၊ သခှါး၊ ဒီအတိုငျးပါပဲ။ အာလူးတှေ ရှမျးပွညျမှာ ရိတျတော့မယျ။ အမြားကွီး ထှကျတော့မယျ။ ခရမျးခဉျြတှေ အငျးလေးကနျထဲက ထှကျတော့မယျ။ အထားမခံတဲ့ သီးနှံတှေ ဖွဈတဲ့အတှကျ ဒီအသီးအနှံတှေ ဒီလို ရိတျသိမျးပွီးတော့ ဈေးကှကျမှာ အခွမေလှ လို့ရှိရငျ နိုငျငံတျော အစိုးရ အနနေဲ့ ဘာလုပျမလဲဆိုတာ ကနြျောတို့ အစိုးရတာဝနျ ဖွဈသှားပွီ။ အဆုံး အထိ ကနြျောတို့ တိုငျးပွညျရဲ့ ထုတျကုနျတှေ၊ အကြိုးရှိအောငျ မစီမံ သေးဘူး။
ဂပြနျက ဘယျလို စီမံ သလဲ။ ဒီ prefecture ချေါတဲ့ တိုငျးနဲ့ပွညျနယျ ဒသေတခုမှာလှနျခဲ့တဲ့ နှဈပေါငျး ရာကြျော ကတညျးက အစုအဖှဲ့ လယျသမား task force တှေ ဖှဲ့ပွီးတော့ အအေးခနျး ကုနျလှောငျစခနျး - cold storage facility တခု ဒသေတိုငျးမှာ prefecture တိုငျးမှာ ဆောကျပေးတယျ။ ဒသေ ၅၀ ဆို အခု ၅၀။
အဲဒါ တလုံးကတော့ ဈေးတော့ ကွီးတာပေါ့။ ဒါ ကနြျောတို့ အနနေဲ့ မတတျနိုငျဘူး။ ယှမျ သနျးလေးထောငျ တနျတယျ။ ဒသေတိုငျးမှာ တလုံးစီဆောကျပေးတဲ့ အတှကျ လယျသမားသညျ အခြိနျ မရှေး သူက ထှကျလာတဲ့ သီးနှံ၊ အခု ကနြျောတို့ ပွောနတေဲ့ ရှမျးပွညျက ထှကျတဲ့ မုနျလာ၊ ဂျေါဖီ၊ ဂငျြး၊ ကွကျသှနျ၊ အာလူး၊ အခု လို ထှကျသမြှကို အားလုံး ဌာနကို သှားပေး။ ဌာနက အားလုံး သိမျးဆညျး၊ ဆေးကြော၊ သနျ့စငျ၊ အဆငျ့ခှဲ grading ခှဲ၊ ထုပျပိုး ပွီးတော့ ဈေးကှကျ market အရောကျ ပို့ပေးတယျ။”
မေး။.။“စိုကျပြိုးထှကျကုနျတှကေို သိမျးဆညျးပေးမယျ့ cold storage အအေးခနျး ကုနျလှောငျ စခနျးကွီးတှေ ကို ဂပြနျမှာ ဆောကျလုပျနိုငျပမေယျ့ မဆောကျလုပျနိုငျတဲ့ မွနျမာနိုငျငံမှာ ရော ဘယျလို လုပျန”ိုငျပါသလဲ။
ဒေါကျတာထှနျးဝငျး။. ။“သူ့လောကျ အကုနျမခံနိုငျပမေယျ့ အကုနျအကြ နညျးတဲ့ cold facility အအေးခနျး ကုနျလှောငျရုံ ပေါ့ဗြာ။ in let – out let လောကျရှိတဲ့ aircon လအေေးစကျတှေ၊ တခုက အဲကှနျး တှကေို သီးနှံခငျးတဲ့ ကွမျးခငျးကနေ in let တခု သှငျးပေးမယျ။ ဂိုဒေါငျရဲ့ အလယျခေါငျ ကနေ out let နဲ့ ထှကျမယျ။ ဒီလို cold storage မြိုးတှေ အမြားကွီးလုပျနိုငျတယျ။
နောကျ ဒီလို အအေးမခံ နိုငျဘူး။ ပမာဏက သိပျမြားမယျ ဆိုရငျ အခွောကျခံမယျ။ ရှမျပွညျက နရေောငျက ၂၄ နာရီ။ အခွောကျခံ ပွီးတော့ အခွောကျခံ ပစ်စညျးတှကေို ကနြျောတို့က ဘယျလို ထိနျးသိမျးပွီး ဘယျလို ဈကှေကျမှာ သှားမလဲ ဆိုတာ ကနြျောတို့ စဉျးစားမယျ။ ဒါက ဒုတိယ နညျးပေါ့နျော။
တတိယနညျးကတော့ လုံးဝ juice အရညျဖွဈနိုငျတဲ့ သရကျသီးလိုဟာမြိုးတှေ ခရမျးခဉျြသီးလို ဟာမြိုးတှေ ကတြော့ juice ဖြျောရညျ ထုတျလို့ ရတယျ။ အရှတေ့ောငျအာရှမှာ ကနြျောတို့ ကောငျးကောငျးကို supply လုပျလို့ တငျသှငျးလို့ရတယျ။ သရကျသီးကို။ အခု အနထေားမှာ ဆိုရငျ သူဌေးဖွဈလောကျတယျ။ သရကျကို အနှဈလုပျပွီးတော့ အအေးခံပွီးတော့ အထားခံအောငျ preserved လုပျပွီးတော့ ပိုးသတျဆေး ဘာညာ၊ preservation လုပျပွီးတော့မြား လုပျနိုငျမယျ ဆိုရငျတော့ ဒါက ရှမှေ့ာ အလားအလာ ရှိတဲ့ဟာ။
ခရမျးခဉျြလညျး ဒီအတိုငျးပဲ။ ခရမျးခဉျြကို ပွုတျပွီးတော့ Ketchup ပေါ့ ခရမျးခဉျြ ဆော့ဈ sauce လုပျပွီးတော့ နိုငျငံတကာ ပို့နိုငျတယျ။
နောကျ ပဲတှေ ဆို မွနျမာပွညျမှာက ပဲက ၁၁ သနျးလောကျ စိုကျတယျ။ ဆီထှကျသီးနှံက ၁၄ သနျးလောကျ စိုကျတယျ။ အားလုံးပေါငျး ၂၅ သနျးလောကျ စိုကျတယျ။၂၅ သနျးလောကျရှိတဲ့ ပဲသီးနှံတှေ၊ ဒီဟာတှကေို စညျသှပျဘူး လေးတှေ can ဘူးလေးတှေ၊ နို့ဆီဘူး နဲ့ ပဲတှကေို ပွုတျပွီးတော့ သခြော သိမျးဆညျးပွီး ပဲတှကေို ရောငျးတာလေ။ ဒီမှာက ပဲ ရှုံးပွီ ဆိုရငျလညျး ဆကျတိုကျကို ရှုံးတဲ့ အတိုငျးပဲ ခံရတာ ပေါ့နျော။ ဘယျသူမှ ကယျမယျ့ အနထေား မရှိပဲ ဖွဈနတေယျ။”
စိုကျပြိုးရေးပညာရှငျ ဒေါကျတာထှနျးဝငျးရဲ့ ပွောကွားခကျြနဲ့ပဲ ဒီသီတငျးပတျအတှကျ သိပ်ပံနဲ့နညျးပညာ ကဏ်ဍကို ဒီမှာပဲ ရပျနား လိုကျပါရစေ။